"Usuku olulodwa" - Psychology 2022
Ngolunye usuku uhlala ekhaya elisha. Omakhelwane bayakubingelela ekuseni baphinde bakugitshelise uma umile wedwa esitobhini ulinde ibhasi, ikhumbi noma itekisi.
U-Lena Linova ungumbhali, intatheli, i-blogger. Ungumbhali wezindaba eziningi nezindatshana, azokwabelana ngazo, kuhlanganisa namakhasi e-"The One". Ngakho-ke hlala futhi ujabulele.
Athi “nakancane” futhi “ngeke yini deign” (ngoNkulunkulu, umakhelwane wami ukhuluma kanjalo, nakuba ngaphandle ungeke usho ukuthi ungowegazi lasebukhosini).Benza ukulungisa ngokuqinile ngesikhathi esimisiwe, sebechazile ngaphambilini ukuthi unezingane ezincane, ngaphandle kwalokho umsindo wokubhoboza noma we-punch uzophazamisa ukulala kwabo kwasemini. Babuza ukuthi "unjani emsebenzini" futhi ababhemi kuvulandi nasendlini yokungena.
Futhi efasiteleni lefulethi lakho unombono omangalisayo wendlu yangasese enezitezi ezimbili esesitayeleni (angazi ukuthi isiphi isitayela, kodwa ngaphandle kwama-baroque / rococo turrets, okuyisitayela ngokwawo). Ngotshani, amaphaneli elanga, izoso, i-hammock kanye ne-swing. Kusihlwa, uphuza ikhofi elifanele efasiteleni elinamafasitela e-panoramic, uzindle ngale ndlu kanye nendawo engenalutho elingana negalofu eduze kwayo. Futhi usuvele wenza i-aphoyintimenti nomakhi wezakhiwo, ucabange ukuthi uzohlala kanjani nenkomishi yekhofi enobisi kuvulandi wendlu yakho enhle eduze kwalobu tshani obuluhlaza. Ukuze libe lihle futhi lishone ilanga.
Kodwa ngolunye usuku, bang, uvuka futhi ubone ukuthi esikhundleni sekhaya lakho elihle lekusasa, imfucumfucu yokwakha ilethwa kule nkundla yegalofu eluhlaza. Khona-ke, endaweni okulahlwa kuyo imfucumfucu, abantu babonakala begqoke izingubo ezibukeka njengodoti kunezingubo. Futhi bakha indlu ebukeka njengendlu yokulala enamafasitela amancane novulandi abancane kakhulu. Kuvela abantu endlini/ehostela abangenandaba nakho konke okuzungezile, ngakho-ke kukhona udoti eduze kwendlu ngaso sonke isikhathi. Futhi empeleni, kungani kungenjalo, uma laba bantu behlala endlini kadoti. Uthenge ama-blind phansi ungaphinde uwavule, ngoba ubuthanda ukubuka utshani nokushona kwelanga, hhayi lokhu okubizwa ngokuthi “abantu abafani futhi banelungelo lokwakhelwa izindlu, susa ubuqhophololo bakho ungabeki. wena ngaphezu kwabanye."
Okuwukuphela kwento embi kakhulu kunendlu kadoti yi-pasta engalungile ethengiswa esitolo se-pastry eduze kwendlu yakho. I-Macaroni - lawa amakhukhi efulawa we-almond yesiFulentshi, uma lokho. Kunezinhlobonhlobo ze-dor blue, i-caramel enosawoti kanye ne-pistachio. Ngezinye izikhathi uthenga lawa makhukhi ase-French angalungile, ngoba kahle, ufuna ngempela okungenani i-macaroni yekhofi enombono wokushona kwelanga, futhi ikude nalungile futhi ukhathele ngemva komsebenzi noma ubuvila nje.
Uma uzibuza umbuzo - "ingabe kukhona iphuzu ekuphuzeni ikhofi enhle nge-pasta engalungile, ikakhulukazi kusukela manje akukho ukushona kwelanga okuhle, kodwa kukhona indlu kadoti?" Futhi uyeka ukuwathenga, uqala ukudla i-oatmeal ekuseni, futhi kusihlwa ungadli nhlobo. Ngoba esikhundleni sokudla kwakusihlwa, manje unebhayisikili, ukugijima nokuhamba ehlathini. Futhi ngemali elondolozwe ku-pasta engathengwanga, undizela ndawana thize uya e-Corsica ngempelasonto ukuze uphuze ikhofi eline-pasta elungile ebheke ekushoneni kwelanga okulungile.
Uma ubuyela ekhaya, uthola isitolo esisha sokuphekela eduze kwendlu futhi abasawadayisi ipasta okungeyona. Ngo-8 ekuseni, kulesi sitolo se-pastry esihle, ama-croissants amnandi anoshokoledi asevele abhakwa wena kanye nomakhelwane abakwaziyo ukuthi "akunjalo." Futhi unquma ukuthi kusukela manje usuku lwakho luzoqala lapho. Ngoba yinhle, inambitheka, ukubukwa kwenkundla yokudlala, ukushwiba-zungeza kanye nezingane ezincane ezijabule.
Kodwa ngolunye usuku, uthola ukuthi omama abaklabalasayo abangahle bawuhlelo lokusebenza lwamahhala lwezingane ezinhle. Futhi lokhu kubi kakhulu kunendlu kadoti kanye ne-pasta engalungile.Izingane ezinelukuluku lanoma yimuphi ubudala azikucasuli futhi uyazi ukuthi ungaziqhuba kanjani izingxoxo ezifanele. Kodwa omama bememeza endlebeni yakho "Yegor, ungamthinti umamncane wakho, uyamhlupha, Vanya, hlala phansi, unganyakazi, Masha, ungagijimi, ungagxumi, ungagibeli. shwibeka kanzima, zibulale - ungabuyi ekhaya" cindezela kakhulu indlu kadoti kanye ne-pasta engalungile.
Laba besifazane bangathanda ukuthola ubhiya endaweni eseduze nekhona. Kodwa udinga ukugcina isitayela "somama abalungile", ngoba ebaleni lokudlala eduze nendlu entsha yokuphuza ubhiya "not comme il faut". Ngakho-ke baphuza i-latte ne-Americano ngobisi ezinkomishini ezilahlwayo ngotshani obusuka esitolo sokudla okunama-croissants futhi bahlale bekhala endlebeni yakho.
Uzama ukutshela omama - "ngicela ungamemezi, u-Yegor wakho, uVanya, uMasha akangihluphi," kodwa banempi yabo nezingane zabo futhi abakuzwa. Ngakho-ke, ngolunye usuku unquma ukuthi ama-croissants ekuseni nge-chocolate akuyona into oyidingayo empilweni. Uyeka ukuya ebhikawozi elibheke inkundla yokudlala bese uyashwiba. Futhi, esikhundleni sokuwela ekuhluphekeni kwaseshashalazini "impilo ibuhlungu", futhi, ngokujabula uphakamisa i-akhawunti yasebhange yaseSwitzerland noma imvilophu ngemali, undizela eMallorca. Phumula. Noma eTuscany. Thenga indlu ngombono wokuguga okungenandaba, abantu abazolile kanye nokushona kwelanga.
Futhi ungasho ukuthi udoti, omama abamemezayo kanye ne-pasta engalungile akusizi futhi akunangqondo. Nakhu. Basiza ukusukuma endaweni ethokomele, efudumele futhi ngolunye usuku wenze okuthile obungeke ukwenze ngaphandle kokubamba iqhaza kwabo. Yikuphi ukubonga okukhethekile kubo nazo zonke izinhlobo ze "merci"!
"Angifuni lutho": kuyini ukunganaki futhi kuyingozi kanjani
Iyini isizathu samazinyo aphuzi nendlela yokubuyisela ukumomotheka "kweparele"
Masibhekane nakho: amazinyo aphuzi mabi, futhi akukho lipstick enethoni yaphansi eluhlaza okwesibhakabhaka ezosindisa usuku. Namuhla ngiphakamisa ukuthola ukuthi yiziphi izimbangela eziyinhloko zamazinyo aphuzi, futhi kungenzeka yini ukuwenza abe mhlophe